कस्ता व्यक्ति सधै युवा रहन्छन् ? – Korea Pati
August 12, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on कस्ता व्यक्ति सधै युवा रहन्छन् ?
हामीकहाँ नेताहरुको अगाडि जोडिने विशेषण हो, युवा । जब कुनै नेताको अगाडि ‘युवा’ फुर्को जोडेर सम्बोधन गरिन्छ, जग हाँस्छ ।
यसकारण कि, ति नेताको उमेरले डाँडा काटिसकेको हुन्छ । तर, चिन्तकहरु भन्छन्, ‘युवा हुनु र नहुनुको सम्बन्ध उमेरसँग जोडिदैन ।’ अर्थात कोही व्यक्ति उमेरले ५० बर्ष पुगेका छन् । तैपनि उनी युवा हुनसक्छन् । कोही व्यक्ति उमेरले २५ बर्षका हुनसक्छन् । तर, उनमा युवापन नरहन सक्छ ।
तपाईं कति बर्ष पुग्नुभयो ? प्रश्न यो होइन । तपाईंमा कति युवापन छ ? घोत्लिनुपर्ने विषय हो यो । तपाईंमा ति तमाम गुणहरु छन् भने तपाईं युवा नै हुनुहुन्छ । र, तपाईंको अगाडि अनन्त संभावना छन् । उमेरको कुरै भएन ।अनलाईन खबरबाट
दक्षिण कोरियामा बेरोजगारी दर २० बर्ष यताकै उच्च ,गत महिनामा २ लाख ७७ हजारले रोजगारी गुमाए !
कोरोना लागेको दाजुलाई बहिनीले राखी बाध्न नपाएपछी (भिडियो सहित )
August 3, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने
May 23, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने